Ihe dị iche n'etiti akwụkwọ Synthetic na PP
1 、 Ọ bụ ihe niile film ihe. Akwụkwọ sịntetik dị ọcha. E wezụga na-acha ọcha, eyi nwekwara a glittering utịp ke ihe. Mgbe emechara akwụkwọ Synthetic, enwere ike ịgbaji ya ma degharịa ya. Mana enweghi ike iji PP mee ihe ọ bụla ọzọ, n'ihi na elu ga-egosi peepe oroma. 2 、 N'ihi na Synthet ...
Eyi / PITA / PVC Self nrapado Holographic Film Na Roll Ma ọ bụ mpempe akwụkwọ
Product Description Ihu ihe PITA / ịkwanyere / eyi Holographic nrapado Water base / na-ekpo ọkụ gbazee / mbughari mpempe akwụkwọ size A4 A5 ma ọ bụ dị ka chọrọ Roll size Obosara si 10cm ka 108cm, ogologo si 100 ka 1000m ma ọ bụ dị ka chọrọ mbukota ihe Strong Pee coa .. .
aha mmado na akwụkwọ mmado
Labels vs. Akwụkwọ mmado Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti akwụkwọ mmado na aha mmado? Akwụkwọ mmado na akara mmado na-adụkọta nkwado, nwee onyonyo ma ọ bụ ederede n'akụkụ opekata mpe, enwere ike iji ihe dị iche iche mee ya. Ha abụọ nwere ọtụtụ ụdị na nha - mana enwere ọdịiche dị n’etiti ha abụọ? Nwoke ...
Surdị ihe owuwu PVC
Piel, na-egbu maramara na-acha ọcha, matte ọcha, nwa, odo, ọbara ọbara, -acha anụnụ anụnụ, uzo green, acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị-acha anụnụ anụnụ na ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Elu ihe bụ uncoated, ọkpụrụkpụ nwere ike họọrọ dị ka 40um, 50um, 60um 80um, 100um, 150um, 200um na 250um wdg Products Njirimara Fabric waterproof, m ...
Waterproof na anwụ ngwa ngwa nke eyi sịntetik akwụkwọ
site ha na 21-01-05
Mbipụta: elu nke ngwaahịa a dị mma ma dịkwa mma, na ederede dị mma. Ọrụ obibi akwụkwọ nke akwụkwọ sịntetik dị ezigbo mma ma dị nkọ, nke na-enweghị atụ ka nke ngwaahịa ngwaahịa nkịtị. Enwere ike iji ya maka akwụkwọ ịma ọkwa, mgbasa ozi, katalọgụ na ngwaahịa ndị ọzọ nwere nnukwu ...
Anyị nwere ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ na-ekpo ọkụ n'oge oyi, iji mee ọnụ ọnụ ma jide BBQ n'èzí.
Ihe ngosi ntanetị na ntanetị na ngwugwu-Mexico na Vietnam
Na Dec, Shawei Label nwere ihe ngosi abụọ na ntanetị maka nchịkọta Mexico na Vietnam Label. Lee anyị bụ isi na-egosipụta ihe ngosi DIY anyị na-adọrọ adọrọ na akwụkwọ mmado Art na onye mmado akwụkwọ anyị, ma webata usoro obibi na ngwugwu, yana ọrụ. Ihe ngosi ntanetị na-enye anyị ohere ikwukọrịta ...
PITA ihe dị iche iche
Piel, matte transperent, na-egbu maramara na-acha ọcha, na-acha ọcha na-acha ọcha, na-egbu maramara ọlaọcha, matte ọlaọcha, na-egbuke egbuke gold, leghaara ọlaọcha, leghaara gold. Enwere ike ịhọrọ ọkpụrụkpụ ihe dị ka 25um, 45um, 50um, 75um na 100um wdg. Ọgwụgwọ Elu Ọ dịghị mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi mmiri. Mmanya na-eguzogide mmanya na-aba n'anya na fricti ...
Labụ kemịkalụ kwa ụbọchị
Ngwaahịa kemịkalụ kwa ụbọchị nwere njikọ chiri anya na ndụ anyị kwa ụbọchị. Dị ka nlekọta ntutu, nlekọta onwe onye na nlekọta akwa na ihe ndị ọzọ, ihe na-eweta uru maka ndụ ka mma, ebe akara na-eme ka ngwaahịa mara mma, na-ebufe ọdịnala akara ma na-amasị ndị ahịa. Product nkwanye: (85μm Kenkowaputa na White Pee / ...
Nkwuputa site na akara ahụike – Shawei Digital
Mgbe Coronavirus-abịa, mgbochi ọrịa ihe ndị ị maara nwere ike n'okpuru masks, na-echebe uwe, aka ude mmiri the Ma, ndị ọchịchị ka eze kwuru na kpọọ nwekwara mkpa mgbochi ọrịa na-akwado ihe. Nwere ike inwe mgbagwoju anya ma chọọ ịmata ihe kpatara ya？ Ka anyị gee ntị na ...
Mbughari labeelu eji mbughari nrapado, a makwaara dị ka enyi na gburugburu ebe obibi, enwere ike wepu ya ọtụtụ oge ma ọ nwere ihe fọdụrụ. Enwere ike wepu ya na mkpado azu ma rapara na mkpado azu ozo, akara di nma, enwere ike igha ozo otutu oge. Wepu ...
Hot Sale: ịgba-ese usoro nke nwa na-acha ọcha ákwà - Light-àmà!
Ejiri akwa na-agbanwe site na arụmọrụ na ojiji. Enwere ike iche ya site na ọkpụrụkpụ, ịdị mfe na ihe ndị ọzọ, wdg. Product Okwu Mmalite The nwa na-acha ọcha ákwà na-akpọ nwa ndabere ìhè igbe ákwà ma ọ bụ nwa ákwà. Ọ bụ kpo oku nke elu na ala abụọ n'ígwé nke kpụrụ ịkwanyere film, ...